"Guyyoota 20 oliif na gudeedan, abbaan warraa koo eessa akka jiru hin beeku" - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Baqattoota Kaampii Hammaarreessaa keessa jiran
Baqattoonni Oromoo 4,000 ol kan keessatti argaman kaampiin Hammaarreessaa jireenyaaf mijataa kan hin taane fi ammallee lubbuu isaaniif sodaa akka qaban baqattoonni BBC'tti himan.
Waggoota 20 oliif naannoo Somaalee Itoophiyaa keessa kan jiraate dargaggoo Ibraahim Ali Abdallaa, baatii tokko dura ganama barii, akkuma yeroo kaanii gaariisaa fe'atee magaala Qabri Bayyaah keessatti hojiif bahe.
"Anaa fardaa koo fe'adhee bobbaa deeme dhagaa fi uleen natti eegalte" jedha.
Guyyaa sana dargaggootni naannoo Somaalee poolisii addaa naannichaa fi hojjettoota bulchiinsa gandaan deeggaramanii dhalattoota Oromoo magaalicha keessa jiraatan tumuu eegaluusaanii dubbata.
"Sana booda gaarii koo dhiisee, matii koo qabadheen lubbuu koo baraaruuf gara bosonaatti baqadhe" jedha.
Amma lakkoofsi baqattoota Oromoo naannoo Somaalee keessaa buqqaafamanii 119,000 ol ta'eera, akka ragaan komishinii hooggansa sodaa balaa Oromiyaa agarsiisutti.
Sababa walitti bu'iinsa kanaan Oromiyaa keessatti kan qe'ee isaanirraa buqqa'an immoo 450,000 oli.
Walumaagalatti sababa waraana poolisii addaa naannoo Somaaleetiin namootni 578,000 ol qe'ee isaanii irraa akka buqqafamuu eera ragaan komishinichaa.
Lakkoofsi buqqaatotaa xiqqaachaa haa dhufuyyuu malee ammas buqqaafamuun itti fufuusaa Waajjirri hooggansa sodaa balaa godina Harargee Bahaa himeera.
Rippoortarri BBC garasitti imales kana taajjabee jira.
Jireenya Kaampii: Madaa fi Abdii
Goodayyaa suuraa Kilinika yeroo kaampii baqattootaa Hammaarreessaa.
Dubartiin fuullishee horbobbuun uwwifame siree tokkorra ciistee jirti, kilinika yeroo kaampii baqattootaa Hammaarreessaa keessa.
Dubartiin eenyummaashee fi suuraashee jireenyashee gara fulduraaf jecha dhoksine tun humnoota poolisii addaa naannoo Somaalee afuriin guyyoota digdamii shaniif dirqisiifamtee gudeedamaa turte.
"Jalqaba abbaa warraa koo waliin nu ukkaamsanii nu fudhatan" jetti.
Bosona itti hidhamte keessatti gudeeddii malee reebichi fi dararaan cimaan irra gahuu BBC'ti himte.
"Erga waan fedhan narratti raawwatanii booda daandii gubbaatti na gatan. Sana booda dhalataan naannoo Amaaraa tokko kaasee mana yaalaa na geesse" jetti.
Haati daa'ima tokkoo tun eessa buutee abbaa warraashee akka hin beeknes nutti himte.
Kaampiin baqattootaa Hammaarreessaa kaampii waliigaltee mootummaa naannoo Oromiyaa fi Naannoo Harariin magaalaa Harar keessatti hundaa'e dha.
Kaampiin baqattootni 4,000 ol dawoo godhatan kun gamoowwan sibiilaa daldalaaf ijaaraman lama of keessaa qaba.
Goodayyaa suuraa Kaampiin baqattoota Hammaarreessaa jireenyaaf mijataa miti
Baqattoonni kaampii kana keessatti haasofsiisne tokko tokkos gamoowwan kun mana jireenyaaf kan hin ijaaramne ta'uusaaniitiin daa'imman qabatanii keessa jiraachuun ulfaataa akka ta'e himan.
Deeggarsi nyaataa fi bishaan dhugaatii taasifamuuf gahaa akka hin taanes dubbatan.
Manni qulqullinaa fi manni fincaanis rakkoo baqattoonni kun kaasani dha.
"Hanqinni nyaataas ta'ee dhugaatii yeroo ammaa kanatti hin jiru, garuu deeggarsa jireenya gaarii duraan jiraachaa turaniin walgitu taasisuun ulfaataa dha" jedhu Itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa godina Harargee Bahaa Obbo Getaachoo Toleeraa.
Gama biraatiin, "midhaan nyaataa lakkoofsa baqattoota jiraniif yeroo ergamutti baqattoonni haaraa waan dabalamaniif hanqinni nyaataa ni mudata" jedhu Daayireektarri komunikeeshinii komishinichaa Obbo Girmaa Wataree.
Rakkoolee kanneen caalaa garuu doorsisni rayyaa ittisa biyyaa sodaa itti uumee akka jiru, baqattoonni kaampii Hammaarreessaa keessatti haasoofsiisne BBC'tti himaniiru.
Rippoortarri BBC kaampicha daawwate kaampiin kun miseensoota poolisii Oromiyaatiin eegumsi taasifamaafii akka jiru fi naannoo kaampichaattis miseensootni raayyaa ittisa biyyaa yeroo socho'an argeera.
Dhimma doorsisaa baqattoonni kaasan garuu komishiniin poolisii Oromiyaa "odeeffannoon nuu hin qaqqabne" jedhe.
Egereen baqattoota kanneenii maali?
Godina Harargee bahaa keessa qofa baqattoota kuma 72 oltu jira.
Baqattoonni kunneen duraan manneen barnootaa fi buufataalee gara garaa keessa ture kan qubatan.
Amma manni baruumsaa waan banameef kan fira qaban gara araddaalee firoonni isaanii jiraniitti yoo ergaman, kaan ammoo waajjiraalee gandaa keessa qubatanii jiru.
Adde Rawulaa Ayyub magaalaa Qabri Bayaah keessatti waggoota kudha lamaaf hojii daldalaa hojjechaa turan.
Hanga guyyaa rakkoon kun uumameetti uummattoota Somaalee ollaa isaanii waliin nagaan jiraachaa akka turan kan nutti himan adde Raawulaan "namootni poolisii addaa naannoo Somaalee jalatti ijaaraman mana nuratti guban, akka nama gonkumaa wal argee hin beekneetti akka diinaatti nutti garagalan" jedhu.
Amma adde Raawulaan aanaa Fadis alawaadaa obboleettiin isaanii kennaniif keessa abbaa warraasaanii fi ijoolleesaani torba waliin jiraatu.
Haa ta'u malee jireenyi baqaa tun baay'ee hammaattuu fi abdii kan isaan kutachiiste ta'uusaa BBC'tti himan.
Baqattoota kunneen karaa itti fufiinsa qabuun dandamachiisuf hojiilee baqatootni kun duraan hojjechaa turan fi gara fulduraatti hojjechuu danda'an adda baafachaa akka jiru waajjirri hooggansa sodaa balaa godina Harargee Bahaa himeera.
Maallaqni buqqaatota kanneen deebisanii dhaabuuf gama manneen baankiitiin walitti qabamaa jiru hanga onkoloolessa 3 bara 2010'tti birrii miliyoona 166 ta'eera.
Gorsa Imalaa: Waldhabbii daangaa Oromiyaafi Somaalee